I-China yasebenza i-Carbon Felt-Felt abavelisi kunye nabathengisi | Beihai Fibreglass
Yenziwe ngefayibha yendalo okanye ifayibha yokufakelwa engalukwanga mat ngokwenza charring kunye nokusebenza.
Elona candelo liphambili yikhabhon, ukugcwaliswa yicarbon chip enomhlaba othile omkhulu (900-2500m2 / g), inqanaba lokuhanjiswa kwepore ≥ 90% kunye nokuvulwa.
3.Ukuthelekiswa ne-carbon granular esebenzayo, i-ACF inamandla amakhulu okufunxa kunye nesantya, ivuseleleka ngokulula ngomlotha omncinci, kunye nokusebenza kombane okuhle, anti-kushushu, anti-asidi, anti-alkali kwaye kulungile ekwakheni.
I-carbon fiber esebenzayo yenziwa ngefayibha yendalo okanye ifayibha yokufakelwa engeyiyo ephothiweyo ngokwenza ukutya kunye nokusebenza. Elona candelo liphambili yicarbon, efumba yicarbon chip enendawo enkulu engaphezulu (900-2500m2 / g), inqanaba lokuhanjiswa kwepore ≥ 90% kunye nokuvulwa. Xa kuthelekiswa ne-carbon granular esebenzayo, i-ACF inamandla amakhulu okufunxa kunye nesantya, ivuseleleka ngokulula ngomlotha omncinci, kunye nokusebenza kombane okuhle, anti-kushushu, anti-asidi, anti-alkali kwaye kulungile ekwakheni.
● Ukuchasana neasidi kunye nealkali
● Ukusetyenziswa ngokutsha
● Indawo engaphezulu kakhulu ukusuka kwi-950-2550 m2 / g
● Ubungakanani bepore encinci ye-5-100A Isantya esiphezulu se-adsorption, amaxesha ali-10 ukuya kwali-100 kunalawo asebenza ngekhabhon
I-carbon fiber esebenzayo isetyenziswa ngokubanzi kwi
1. Isinyibilikisi sokurisayikilisha: inako ukufunxa iphinde iphinde isetyenziswe kwakhona i-benzene, ketone, esters nepetroli;
2. Ukucoca umoya: inokufunxa kwaye icoca irhasi yetyhefu, irhasi yomsi (njenge-SO2, NO2, O3, NH3 njl.), I-fetor kunye nevumba lomzimba emoyeni.
3. Ukucocwa kwamanzi: inokususa i-ion enzima yesinyithi, ii-carcinogens, ivumba, ivumba lomngundo, i-bacilli emanzini kunye nesisombululo. Ke ngoko isetyenziswa kakhulu kunyango lwamanzi kumibhobho yamanzi, ukutya, amayeza kunye namashishini ombane.
4. Iprojekthi yokhuselo lokusingqongileyo: igesi yenkunkuma kunye nonyango lwamanzi;
5. Isikhuseli somlomo esineempumlo zomlomo, izixhobo ezikhuselayo nezichasene nemichiza, iplagi yokucoca umsi, ukucoca umoya ngaphakathi;
6.Funxa izinto ezinemitha yeathom, isixhobo sokuthintela ukomelela, ukucokiswa kwentsimbi exabisekileyo kunye nokurisayikilisha.
7. Ibhandeji yezonyango, intsholongwane ebukhali, izintso ezingezizo;
8. I-elektrode, iyunithi yokufudumeza, i-electron kunye nokusetyenziswa kwezixhobo (amandla aphezulu ombane, ibhetri njlnjl.)
9. Izinto ezichasayo ezichasayo, ezinobushushu obuphezulu kunye nezinto ezifakiweyo.
Umhlaba othile weBET（m2 / g）
Isantya sokufunxa i-Benzene (wt%)
Ukufunxa iodine (mg / g)
I-Methylene eluhlaza okwesibhakabhaka (ml / g)
Umthamo wokuvula (ml / g)
Egqithileyo Imisonto yeBasalt
Okulandelayo: Ilaphu leCarbon Fibre esebenzayo
Yenziwe yasebenza iCarbon Felt